आफ्नो जीवनबाट कुनै एउटा कुरा हटाउन चाहे के हटाउनुहुन्छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः भाद्र १९, २०७५ - साप्ताहिक
श्रीमती, न विगत सोच्नुपर्ने न वर्तमानको अभाव, न भविष्यको चिन्ता । एक्लो जीवन साँच्चै सुन्दर अनि रंगीन हुने थियो ।
भोक लाग्ने बानी । पेटलाई एकथरी भोक अनि मनलाई अर्कोथरी भोक । कसरी हो भोक लाग्ने बानी हटाउनुपरेको छ । साह्रै गरिब अनि हरिप भइयो सर ।
कसैका निम्ति मुटुभित्र कोचिएर बसेको माया । त्यो माया जसको नशा लागेपछि कुनै ब्रान्डेड रक्सीको नशा पनि फिक्का सावित हुन थाल्छ ।
पैसाप्रतिको मोह । अझ समाज अन्धो भा’को छ पैसाले गर्दा । यदि पैसाप्रतिको मोह कम भयो भने अवश्य नै समाज परिवर्तन हुने थियो ।
हामी नेपाली युवाहरूको बाध्यता अनि विवशता हो— बिदेसिनु । आफ्ना सारा दु:ख हटाउँछु भन्ने इच्छा, आकांक्षा बोकी आफूलाई जीवन दिने बुवाआमालाई छाडेर अनि आफ्नी जीवनसंगिनीसँग टाढा रहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि त्यस्तो बाध्यता हुँदैनथ्यो भने म मेरी प्यारी श्रीमती अनि आमासँगको दूरी हटाउने थिए ।
तिम्रो नक्कले कान्छा
यदि हटाउन मिल्ने भए म यो मनलाई नै हटाइदिन्थें, जसका कारण म सधैं कमजोर सावित भैरहेको छु ।
मेरो विचारमा पैसो । जताततै पैसो, पैसो, पैसो । यो पैसो नभएको भए सायद संसारमा कुनै समस्या रहँदैनथ्यो ।
चिसो पिउने बानी । अलिकति गर्मी चढ्यो कि चिसो पिउन लागिहाल्छ । म त चिसोको दास नै भएछु ।
रिस, एकछिनको रिसले मानिसहरू जीवनभर पछुताउने काम गर्छन् ।
५ वर्ष सँगै पढ्दा लगा’को माया, जुन सफल हुन सकेन ।
फेसबुक चलाउने बानी ।
उनको याद ।
निराशा र लोभ ।
नराम्रो सोचाइ ।
पेट, मलाई लाग्छ यो पापी पेटले नै सबैलाई पापी बनाएको हो ।
म मेरा विगतका नराम्रा सम्झना मेट्न चाहन्छु ।
अल्छीपन र अरूको आश । मेरो मात्र होइन, यो देशका हरेकको, तब मात्र बन्नेछ नयाँ नेपाल ।
बढी गोरो छु, गहुगोरो बन्ने काम गर्ने थिएँ ।
धेरै किताब पढ्ने आदत कम गरी सीमित अध्ययन गर्ने थिएँ ।
डा. एलिया अर्याल
नराम्रा लाग्ने सबै कुरा हटाउनु जाती । मैले हटाउन चाहेको कुरा पश्चाताप हो । कामपछिको फल जे होस्, स्वीकार गर्नुपर्छ ।
देशमा जबरजस्ती थोपरिएको संघीयता ।
सुखी र सम्पन्न हुने महत्वकांक्षा, जसले कहिल्यै शान्तसँग बाँच्न दिएन, सामाजिक कार्यमा लाग्न दिएन ।
पैसा कमाउने तनाव । सबैजसोलाई हुने यो तनाव आफूबाट हटाउन मन छ ।
कमजोरी हटाइदिने थिए ।
फेसबुक र ट्विटरका नचाहिँदा साथीहरू ।
छिट्टै विश्वास गर्ने बानी ।